09-06-2016, 05:40 PM ရန်ကုန် KTV နှင့် စော်နဲ့သွားလို့ကောင်းတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်များ .... (၂၀၀၃ တုန်းက Post ပါ)
စမ်းချောင်း.....ရှမ်းကုန်းလမ်းက.....Green Ice လည်း အဆင်ပြေပါတယ်......1 section ကို.......၄၀၀၀ ပဲလေ....။
မြေနီကုန်း က yuzana burger and snack ဆိုင်လေးလဲ ဂွတ်တယ် ၊ private လဲဖြစ်တယ် ၊။
ဗိုလ်မြတ်ထွန်းတာဝါ ဘေး က mickeymouse ဆိုင်မှာလဲ သီးသန်ခန်းရှိတယ်ဗျို့ 46 လမ်း အလယ်ဘလောက် ထင်တာပဲ။
8 မိုင်မှာ .........DVD ရုပ်ရှင်ရုံရှိတယ်............3season ခွေငှားဆိုင်ရဲ.အပေါ်ထပ်မှာပါ..........
ပထမထပ်ပေါ. .......တစ်ကားကို 4000 ပေးရတယ်ဗျ .......အခန်းက 10 ပေ7ပေလောက်ရှိတယ်
projector နဲ.ပြတာ............. 5ပေ7ပေလောက်ရှိတဲ. မွေ. ရာပါတယ် .......ခေါင်းမှီပြီးကြည်.လို.ရတယ်
အခန်းက ကျွှန်တော်သိသလောက် 12 ခန်းလောက်ရှိမယ်ထင်တယ် ..............အခန်းကိုမှန် နဲ.ကာထားပေမယ်.လဲ
အပြင်ကကြည်.ရင်မမြင်ရဘူးဗျ....အထဲကကြည်.မှမြင်ရတယ်........အထဲမှာ ကိုယ်.စော်ကိုပိုင်ရင် ဖိလို.တောင်ရတယ်
သမိုင်းလမ်းဆုံမှာအခုအသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ သိရိမင်္ဂလာဆိုတဲ့ တည်းခိုခန်းပါပဲဗျာ။ အခုမှအသစ်ဖွင့်ထားတာမို့တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဗျာ။ အခန်းလည်းသန့်ပါတယ်။ အခန်းထဲမှာလည်း တီဗီ အဲယားကွန်း ရေခဲသတ္တာ အစုံပါပါတယ်ဗျာ။ တစ်နာရီကိုမှ 2000တည်းပါ။ တစ်ညလုံးအိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ 6000 ပဲပေးရပါတယ်။ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ နေရာသန့်သန့်လေးကိုမှသွားချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက် ရှယ်ပေးလိုက်တာပါ။
ပိတောက်ချောင်း နားက အေးရိပ်မွန် ဟိုတယ်က အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်......
အတွင်းပိုင်းကျခြင်း...အခန်းအပြင်အဆင်များက မထင်မှတ်လောက်အောင်ကောင်းပါတယ်.ကိုယ်ချစ်သူနဲ့ သွားဖို့ အသင့်တော်ဆုံးလို့့ထင်ပါတယ်
3 နာရီ ကို 5500 ပါ တနေ့လုံး ဆို ရင် 11000/12000 လောက်ပဲကျပါတယ်..ည8နာရီနောက်ပိုင်းရောက်ခဲ့ရင် 9000ပဲပေးရပါတယ်
ကျွန်တော် ကတော့ 8နှစ် လောက်နီး2 အသုံးပြုခဲ့ပီးပါပီ...အရင်က3နာရီ 5000 ပါ အခုမှ500 တက်သွားချင်းဖြစ်ပါတယ်...တပြားမှကြော်ငြာခမရပါ...ချစ်သူချင်းကိုယ်ချင်းစာလို့ရေးတင်ချင်းဖြစ်ပါသည်..။ ဘုရင်နောင်လမ်းမပေါ်... ပိတောက်ချောင်းမှတ်တိုင်.....အေးရိပ်မွန်အိမ်၇ာအလယ်လမ်းဖြစ်2 အစွန်းဆုံးလမ်းကဖြစ်2 ၀င်နိုင်ပါတယ်က ၀င်ရင် ဆိုင်ပုတ်ရှိပါတယ်....။
ဒဂုံမြို့နယ် အမျိုးသားရေကူးကန်ဝန်းထဲက (အိုလံပစ် ) ဟော်တယ်လည်းကောင်းတယ် အခန်းခကတော့ 13000 ကနေ 16000 ပဲရှိတယ်
ယုဇန... ဟမ်ဘာကာဆိုင် မြေနီကုန်းမှတ်တိုင်မှာ ဆင်း ဓါတ်ဆီ ဆိုင် ရှိတဲ့ လမ်း ဓမ္မစေတီလမ်းအတိုင်း ပြည်သူဥယျာဉ်ဖက်ကိုသွား...
ဘယ်ဖက်ကို မျက်စေ့ ရှင်ရှင် ထားပြီးကြည့် ပထမ လမ်း လား ဒုတိယမြောက်လမ်းလား မသေချာလို့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ့ရလိမ့်မယ်
အတန်အသင့် အလုပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ နေရာပဲ... ပထမဆုံး...အခန်းမဝင်ဘူးသေးတဲ့ မိန်းကလေးကို အဲ့ ဒီ ကို အရင်ခေါ်သွားပြီးတော့ ကျင့်ပေး
ပြီးမှ အခန်းတွေ ကို ခရီး ဆက်ရင် ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်....
ဆက်ရှင်ခ = ၁၀၀၀
ပျမ်းမျှ == တစ်နာရီကို ၂၀၀၀ ကျပ်လောက်ပဲကုန်မယ်...
အခန်းတော့မဟုတ်ဘူး..... မိးမှောင်မှောင်လေးနဲ့ အစပျိုးဖို့ အကောင်းဆုံး နေရာ
၁နာရီ ၂ နာရီလောက်သာနေသင့်သည်။
ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း အောင်ဘလောက် မှာ coff-king (coffee shop ) ပဲဗျ စော်နဲ့သွားရင် အခန်းယူလို့ရတယ် 1 နာရီအခန်းကို 4000
အဲ့ဒီမှာ ဘီယာလည်းမှာသောက်လို့ရတယ်......လူတော့ မရှုပ်ဘူးနော် အေးဆေးပဲ ဖိလို့ရတယ် air-con ဆို4000 air-con မပါရင် 3000 ပဲ..။
ဓမ္မစေတီလမ်း စကာင်္ပူသံရုံးဘေးက Flamingo KTV ...ပါ.........။
ဆော်တွေစောက်ရမ်းလန်းတယ်...။ တစ်နာရီကို(၅၀၀၀)ကျပ်နဲ့ ၂ချိန်လောက်တော့နေရတယ်...
ဆော်တွေက မုန့်ဖိုး-၅၀၀၀ိ/-လောက်ပေးရတယ်...။ အခန်းထဲမှာအကုန်ကိုင်လို့ရတယ်..နှိုက်လို့ရတယ်..။ ဖုတ်လို့တော့မရဘူး..။
နောက်နေ့ချိန်းပါ....။ ကျိန်းသေလာပါတယ်....။ ဆော်ကိုမုန့်ဖိုး ၂၀၀၀၀ိ/-လောက်တော့ပေးရတယ်...။
ရှင်းရှင်းဆိုတဲ့ဆော် စောက်ရမ်းမိုက်တယ်...ပိပိကသေးပြီးကြပ်နေတာပဲ...။ နှာအရမ်းထန်တယ်...။ မှော်ဘီ GTC မှာ First Year တက်နေတယ်
BEAUTY PALACE KTV... ဘုရင့်နောင်..
COST 500,000 FOR 1 time show..
need extra 10000 kyats for each girl.. according to number..as မုန့်
ံHollywood KTV ပြည်လမ်းပေါ်မှာ အရင်က Liberty Hotel ပြည်လမ်း KMD နဲ့ MK နားမှာ ၁ စက်ရှင်ကို ၈၀၀၀ပါ.. ဆော်တွေကတော့ တော်တော်လန်းတယ် များလည်းများတယ်
ကျန်တာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ညှိ့ပေါ့
ဆရာစံလမ်းက Co Co ( KTV ) ကိုသွား..... KTV ကို ရောက်ရင် အခန်းတစ်ခန်းယူ Waiter ကို မုန့်ဖိုး 1000 ပေးပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Size ( အသက်ဘယ်လောက် ဘော်ဒီကသေးသေးလားကြီးကြီးလားဆိုတာတွေ) ရှိတဲ့ စွန်တွေကို ခေါ်ခိုင်းလိုက်........
ဒီဆိုင်မှာက ကချင်မတွေ ရှမ်းတရုတ်မတွေများတယ် ........ ရောက်လာရင် သီချင်းတွေနည်းနည်းပါးပါးဆို ဘီယာတွေအမူးသောက် နည်းနည်းပါးပါးချုပ်ပေါ့ ပြီးရင် ညဆိုင်ပိတ်ရင် Club သွားမယ်လို့ပြော ( တချို့စွန်တွေက တစ်ညတည်းနဲ့လိုက်တယ် တချို့ဟာတွေက အင်တင်တင်နဲ့ သူငယ်ချင်းပါမှလိုက်မယ်တို့ ) ကိုယ်ဟာကိုယ် ပါအောင်ချုပ်ပေါ့...... သူတို့ဆိုင်ကပိတ်ရင် ဖယ်ရီတွေနဲ့ အိမ်ကိုပြန်လိုက်ပို့ကြတယ်
သူတို့ချိန်းတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်က သွားစောင့်နေပေါ့....... ပြီးရင်တော့ Cafe Lavel Club ကို သွားပေတော့ ဒီ Club က မနက်5နာရီအထိဖွင့်တယ်...
ကလပ်မှာ စွန်ကိုမူးအောင်တိုက် နည်းနည်းပါးပါးပွန်းပေးပေါ့.....(စွန် Feel လာအောင် )........ နောက်တော့ Hotel မှာ ဖဲသွားရိုက်မယ်ဆိုပြီး ခေါ်သွားပေါ့........ Hotel ရောက်ရင် ငါ့ညီစိတ်ကြိုက်လုပ်ပေတော့............
Co Co ( KTV ) က စွန်တွေ လန်းလည်းလန်းတယ် သန့်လည်းသန့်တယ်.... ( ကျွန်တော့်တွေ့သလောက်ကိုပြောတာ )........
ဒီဆိုင်မှာ ( ချစ်ဖူးငုံ )ဆိုတဲ့ဆော်တော့်တော့်မိုက်တယ် ......
Thanks given by: unnamed988 , komin779 , zizizi12
bravomyanmar Junior Member
10-19-2016, 02:42 AM နေပြည်တော်ကဈေးနည်းတဲ့တည်းခိုခန်းတွေသိလားဗျာ
Jerrylato Junior Member
10-22-2016, 12:00 AM ကျော် ရန်ကုန်က အခန်းသန့်ဈေးနည်းတာ သိချင်ဗျာ
Zawyethunder Junior Member
12-07-2016, 03:10 PM ရှစ်မိုင်က ရုပ်ရှင်ရုံနေရာလေး တိတိကျကျပြောပေးပါလား ခင်ဗျ